Finalka Champions League: Paris St-Germain iyo Bayern Munich ayaa ku kulmi doona Lisbon – Benaadirtv.com
Finalka Champions League: Paris St-Germain iyo Bayern Munich ayaa ku kulmi doona Lisbon
Taariikhda: Axadda 23 Ogosto Kick off: 23:00 Waqtiga Soomaaliya; Goobta: Estadio da Luz, Lisbon
Paris St-Germain ayaa wajihi doonta Bayern Munich finalka Champions League ee axada – iyadoo labada koox ay midba u raadinayaan inay taariikh wanaagsan ee galaan.
Tartanki la bilaabay Juunyo 2019 iyada oo wareega hore la soo gebogebeeyay ayaa ku soo gabagaboobay is af garanwaaga u dhexeeya kooxda ugu fiican kubbadda cagta adduunka ee ka soo horjeedan mid ka mid ah weeraryahannada ugu wanaagsan adduunka.
Iyadoo kooxda naxariis darada ah ee Bayern ay baadi goobeyso sedexleeyda koob ee Yurub iyo taariiqda ee ay ku faanto, PSG ayaa raadineysa inay noqoto horyaalnimada Yurub markii ugu horeysay.
‘Kooxda ugu fiican iyo ciyaartoyga ugu fiican’
Markii ay ku guuleysteen labadaba Bundesliga, iyagoo leh 13-dhibcood kaga horeeyo qooxda 2aad, iyo Koobkii Jarmalka gacanta ugu jurto, Waxey Hansi Flick ee Bayern dooneysa in ee noqoto sida kooxda guulaha ee Jupp Heynckes sanadki 2012-13.
Khabiirka kubbadda cagta Jarmalka Raphael Honigstein ayaa yidhi: “Kooxda 2013-kii siyaabo badan ayay u fiicnaayeen laakiin markaa waxay lahaayeen ciyaartoy ay u badan tahay inaysan geli doonin kooxdan,” khabiirka kubbadda cagta Jarmalka Raphael Honigstein ayaa yidhi.
Bayern ayaa ka hor martay dhamaan tartamada xilli ciyaareedkan, marka lagu daro 8-2 wareegii sideed oo ay ku guuleysatay Barcelona.
Waxay dhalisay 42 gool 10 kulan oo ay kujirto 10 kamid ah labo kulan oo ay la ciyaareen Tottenham halka 7 ay ka badanyihiin labo lugood oo ay la galeen Chelsea wareega 16ka.
Isku dayga lagu hor istaagayo Bayen inuu ku guuleysto koobkii lixaad ee Yurub waa koox PSG oo safkeeda hore ka kooban Neymar, Kylian Mbappe iyo Angel di Maria.
19 kulan oo Champions League ah oo uu u saftay PSG, Neymar wuxuu si toos ah ugu lug lahaa 23 gool, isagoo dhaliyay 14 jeer, sagaalna caawiyey.
Khabiirka kubbadda cagta Spain Guillem Balague ayaa yidhi: “Bayern waa kooxda ugu fiican Yurub.
“Waa kooxda ugu fiican marka loo bar bar dhigo kooxda ugu fiican ciyaaryahanka, Neymar. Waxaad heysataa qof wax uun ka qaban kara wax aan aheyn sida qof kale oo adduunka ah haatan.
Waxa uu sameeyaa ku dhawaad ​​waxyaabo aan macquul aheyn. Waa laga yaabaa inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee kaligiis ku badin kara kulankiisa.”
Khabiirka kubbadda cagta Faransiiska Matt Spiro ayaa rumeysan in guushii Paris St-Germain ay sabab u noqon laheyd go’aanka kooxdu ay ku siisay Barcelona rikoor adduunka ah oo ah 222 milyan oo euros (£ 200m) oo loogu talagalay Neymar bishii Ogosto 2017.
Miyay Bayern u baahan tahay inay wax beddesho?
Bayern Munich ayaa gaartay finalkoodii 11aad ee tartankan, iyadoo Real Madrid ee tahay qooxda kaliya ay ciyaartay in ka badan (16) final.
“There is a slight debate and concern inside the team that they need to adapt and adjust a little bit to be
Waxaan arki karnaa kooxda oo hoos u sii yara dhaceysa oo laga yaabo inaadan riixeynin waqtiga oo dhan,
“Waxaa jirta dood yar iyo walaac ka dhex jira kooxda oo u baahan inay la qabsadaan oo ay waxoogaa yar la qabsadaan si ay uga guuleystaan ​​Paris St-Germain.”
Kani waa finalkii ugu horreeyay ee Paris St-Germain, iyadoo wiilasha Thomas Tuchel ay yihiin kooxdii 41-aad ee ka soo baxda bandhigga.
Waxay ka mid ahaayeen qooxda lacagta ugu badan ku bixiya Yurub, laakiin sidoo kale ka mid ah kuwa ugu magaca weyn qaaradda ee heer sare aanan gaadhin.
Weeraryahanka kooxda Bayern Robert Lewandowski ayaa dhaliyay sagaal kulan oo isku xigta Champions League, kaliya Cristiano Ronaldo ayaa shabaqa soo taabtay tartamada oo isku xiga taariikhda.
Laakiin Serge Gnabry, oo dhaliyay labo ka mid ah seddexdii gool ee ay Bayern dhalisay semi-finalka kulankii Lyon, ayaa fure u ah inay Bayern ku guuleysato Champions League markii ugu horeysay tan iyo 2013.
Previous Previous post: Source: The appointment of the new Prime Minister and the plans of the President
Next Next post: Suspect arrested on Turkish Airlines flight from Mogadishu